Ahụmahụ Malta na nnukwu ihuenyo
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Malta » Ahụmahụ Malta na nnukwu ihuenyo
Ntọala ntọala site na ntọala nke ntọala tv show
Nwee Malta site na oghere nke mmepụta na-abịa n'ihu ka eserese na Malta n'enweghị nsogbu n'oge 2020.
Malta bụ ebe emere maka mmepụta ihe nkiri 11 na 2020 na 2021 n'agbanyeghị nrịba oria COVID-19 - emezuru ya niile na usoro nchekwa.
Site na Hallmark gaa Apple TV kacha kachasị ọhụụ, Malta setịpụrụ ebe a mara mma na ọdịdị ụlọ mara mma.
Ezubere ịmara nke ọma ihe nkiri ejidere mgbe eserese na Malta bụ Game nke n'ocheeze, Jurrasic World Dominion, Gladiator, na Troy, ịkpọ aha ole na ole.
Tolọ na ọtụtụ UNESCO World Heritage Sites, Malta abụrụla ihe nkiri esere maka mmemme iri na otu na-abịanụ, gụnyere aha abụọ North America, ha niile mepụtara n'oge nchekwa COVID-19. A maara agwaetiti Mediterranean maka ọmarịcha mara mma, ọdịdị ala ya na ihe owuwu mara mma nke zuru oke maka ọnọdụ ihe nkiri. A na-eji ọdịdị pụrụ iche nke Malta na fim dịka Cinggbaso Ọgwụ, Gwakọta na Mediterranean, na Apple TV kacha ọhụrụ sci-fi thriller, Foundation (filmed na 2021).
Ihe ịma aka na 2020 bụ n'ezie nchekwa nke ndị na-eme ihe nkiri na ndị ọrụ yana ndị bi na Malta. Office nke Deputy Prime Minister wepụtara ndepụta nke iwu, nyere iwu ụkpụrụ nduzi n'ihi na onye ọ bụla na ndị ọrụ mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ ihe nkiri na-eme na Malta n'oge ọrịa COVID-19.
Kemgbe ọtụtụ afọ, Malta adọtala ọtụtụ ihe ngosi akara ngosi gụnyere Game of Thrones, Gladiator, Troy, yana nke kachasị ọhụrụ nke Jurassic World franchise, Ụwa Jurassic: Ọchịchị. N'ime ihe nkiri iri na otu buru ibu emere na Malta na 2020, mba ahụ jisiri ike jiri ikike mpaghara maka ndị ọrụ na ọrụ ha setịpụrụ, na -emepụta ọtụtụ puku ọrụ maka ndị ọrụ Malta.
Cinggha ọgwụgwọ - Agbanye kpamkpam na Malta, na-egosi ihe nkiri n'obodo Valletta, Fort St. Elmo, Marsaxlokk, Mellieha na Attard. Setịpụ na 2021.
Gbanwee na Mediterenian - Gbagburu na obodo nke Valletta, na Phenicia Hotel, Upper Barrakka Gardens, na Naxxar's Palazzo Parisio. Dị ugbu a na Ọwa Hallmark.
Ụwa Jurassic: Dominion - Ewere ihe nkiri emere na obodo Floriana, Valletta, Birgu, Pembroke, Mellieha. Setịpụ ịhapụ ụlọ ihe nkiri na June 2022.
Ntọala - Gbara na 2021 na Malta Film Studio, Fort Manoel. Setịpụ ịhapụ oge mgbụsị akwụkwọ nke 2021.
Jurassic World Dominion image site n'ikike nke imdb
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya na nchekwa ndị ahịa, Clayton Bartolo, kwuru maka afọ gara aga na ụlọ ọrụ ihe nkiri ahụ, na-ekwupụta na "ọ dị mma ịmara na n'etiti ọrịa na-efe efe COVID-19, Malta jisiri ike dọpụta mmemme 11 n'oge 2020, na ngụkọta ego nke € 32 nde (ihe ruru $ 38,144,000USD). ” Onye ozi ahụ kwupụtara na ọ na-atụ anya mmejuputa nke Malta Film Studios Master Plan tinyere nke izizi izizi nke Malta.
Malta Film Commissioner, Johann Grech kwukwara na ọ dị mkpa iburu n'uche na mmepụta mere Malta ka ọ bụrụ otu n'ime ebe ha na-ese ihe n'agbanyeghị ọnọdụ na ihe ịma aka ndị bilitere n'ihi ọrịa COVID-19 n'oge 2020. "Malta na-egosi n'ezie ikike ya, nkwụsi ike ya , ike ya. Otu - anyị jisiri ike wepụta nkwa anyị iji kwado ndị na-arụ ọrụ na ndị ọrụ mara mma, ọrụ magburu onwe ya na nnukwu ebe yana nke kachasị mkpa, n'enweghị nsogbu. Anyị bụ ndị mpako na mpaghara anyị talent. " Grech kwuru.
Mix Up in the Mediterranean - site n'ikike nke Hallmark Channel
Banyere Malta Ihe nkiri Commission
Akụkọ Malta dị ka ebe njedebe maka imepụta ihe nkiri laghachiri afọ 92, bụ mgbe agwaetiti anyị ejirila ụfọdụ n'ime ihe ngosi dị elu gbapụ na Hollywood. E guzobere Malta Film Commission na 2000 na ebumnuche abụọ nke ịkwado obodo na-eme ihe nkiri, ma n'otu oge ahụ na-ewusi ngalaba ọrụ ọrụ ihe nkiri ahụ ike. N'ime afọ iri na asaa gara aga, mbọ a na-agba n'ihe nkiri Film iji kwado ụlọ ọrụ ihe nkiri mpaghara ahụ butere ihe nkwado dị iche iche, gụnyere mmemme agbamume ego, Malta Film Fund, na ego Co-Production.
Kemgbe afọ 2013, mmejuputa atumatu ohuru emeela ka mmụba a na-enwetụbeghị ụdị ya na ụlọ ọrụ ihe nkiri mpaghara, ebe ihe karịrị 100 mepụtara na Malta na-ebute ihe karịrị € 300 nde na ntinye ego nke mba ọzọ na akụ na ụba Malta.